Semalt: Ahoana no ahafantarako fa ny ordinaterako dia Botnet Zombie?
Misy virosy marobe, spyware, kankana, adware, keyloggers, rootkits, trojans, botnets, ary backthrough izay manafika ireo fitaovan'ny mpampiasa isan'andro. Na dia mety ho simba ny ankamaroany amin'ny fampiasana programa Antivirus sy anti-malware, fa ny sasany dia mampidi-doza, ary lasa sarotra ho antsika ny miaro ny ordinatera. Jason Adler, Semalt Mpitarika Success Manager, dia mampitandrina ny mpampiasa aterineto rehetra fa malware toy ny botnets ary rootkits no endrika mampidi-doza indrindra, ary saika tsy ho vitantsika mihitsy ny hisorohana ny fahatongavan'izy ireo amin'ny ankapobeny. Ny lisitry ny fametahana ny fandaharana ratsy sy ny aterineto ratsy dia lavitra lavitra. Ny mpampiasa webmasters rehetra sy ny mpampiasa media sosialy dia efa niharan'ny herisetra botnet sy ny viriosy amin'ny solosaina amin'ny fomba iray na ny iray hafa.
Fampidirana amin'ny botnets
Botnets dia rôbôla kely eo amin'ny aterineto izay ahafahan'ireo vahiny toa mpikomy sy spammers hifehezana ny rafitry ny ordinateranao raha tsy fantatrao. Botnets no tamba-jotra an-jatony amin'ireo fitaovana an'arivony voan'ny aretina. Ireo fitaovana ireo dia mifampiresaka amin'ny alalan'ny server iray manokana ary mikendry ny hifehezana ireo fitaovana vaovao marobe isan'andro. Ny tanjon'izy ireo dia ny hangalarana ny angon-drakitrao, ny fisintonana ny fitaovana ampiasainao ary ny fanaraha-maso ny fampidiram-bola amin'ny Internet. Vondrona mpiaro ny cyber no manao io asa io ary antsoina hoe mpiandry biby. Mianjera ny fitaovana ampiasainao amin'ny alàlan'ny solosainy mifandray aminy izy ireo ary mametraka ny fitaovana ampiarahanao amin'ny tambajotra sosialy. Aorian'izay, ity tamba-jotra ity dia azo ampiasaina ho an'ny asa goavana maro..Ireo hackers sy spammers dia mampiasa botnets isan-karazany mba hanatanterahana ny asany samihafa amin'ny aterineto. Ny tanjon'izy ireo dia ny mahafantatra ny zava-drehetra momba ny rafitrao, fa mety ho liana amin'ny famindrana ny volanao amin'ny banky iray hafa.
Ny PC dia lasa solosaina zombie
Raha tsy voafehinao ny fitaovanao ary manatanteraka ny asany amin'ny torolalan'ny olon-kafa, dia misy ny fahafaha-manafika ny solosainao botnetiana. Ny iray amin'ireo fomba famindrana ny fitaovana dia ny fametrahana rindrambaiko maloto. Raha vao haingana ianao no maimaim-poana sy manamboatra rindrambaiko antitra, dia tokony handinika kely momba ny loharanony ianao. Tokony hanandrana hanombantombana ianao raha navarinao tao amin'ny tranonkala ara-dalàna na sehatra hafahafa. Tsy tokony haba na programa na oviana na oviana ianao raha tsy fantatrao ny loharano. Zava-dehibe koa ny manamarina ny antontan-kevitra sy programa azonao entina. Aza miditra amin'ny rohy izay alefa amin'ny mailaka. Plus, tokony tsy tokony hanokatra tranonkala mailaka ianao ary tsy tokony hifandray amin'ireo tambajotra WiFi mampiahiahy sy tsy fantatra.
Ny takelaka botnetin'i Trojan matetika dia miafina ao amin'ny mailaka attachments. Raha mahazo mailaka toy izany ianao amin'ny filazanao fa efa manokatra tahirin-tsarimihetsika, rakitra iray na antontan-taratasy na jpg, ianao dia tokony handinika azy tsara. Raha tokony ho izany dia esory fotsiny ity mailaka ity ary tsindrio ny rafitry ny ordinateranao haingana araka izay azo atao.
Mamantatra ny otrikaretin'ny botnet amin'ny fitaovana
Azonao atao ny mamantatra ny otrikaretina botnet raha mihena ny ordinateranao na tsy mitsahatra ny manatanteraka ny baikonao indray mandeha na indroa isan'andro. Raha miadana ny tambajotranao sy ny Internet, dia mety mety hampidi-doza ny fitaovana ampiasainao. Raha tsy nanokatra tranonkala na tranonkala manokana ny solosainao na dia efa naverinao indroa na intelo na indroa, dia misy ny voka-dratsin'ny botnet zombies Source .